MPPT umoya gqith solar isilawuli WWS50A-48 / -96 / -120 / -220 / -240 - China Ningbo waseHaiti Holding Group
MPPT umoya gqith solar isilawuli WWS50A-48 / -96 / -120 / -220 / -240
MPPT umoya gqith solar isilawuli WWS50A-48 / -96 / -120 / -220 / -240 Le MPPT umoya / isilawuli gqith elanga isetyenziselwa ukulawula amandla omoya yokutshaja ibhetri phantsi ombane rhoqo. Ukongeza, kuquka ulawulo womserbia elanga, nto leyo eyenza kube okulungileyo / isicelo gqith elanga umoya. Iimpawu: 1 Phantsi umsebenzi MPPT ophetheyo ombane: Ukuphucula indlela esisebenza yemveli kaThixo asanelanga, nto leyo kuphela xa ifeni okanye ombane panel wezijikelezi-langa ngaphezu ombane ibhetri bangena charging.Now kwindlela ...
Supply Amandla: 1000-5000Piece/Pieces per Month
Imiqathango Intlawulo: L/C,T/T, Western Union, Paypal
Le MPPT umoya / solar isilawuli gqith isetyenziswa ukulawula amandla omoya yokutshaja ibhetri phantsi ombane rhoqo. Ukongeza, kuquka ulawulo womserbia elanga, nto leyo eyenza kube okulungileyo / isicelo gqith elanga umoya.
1 ombane Low umsebenzi ophetheyo MPPT :Ukuphucula indlela esisebenza yemveli kaThixo asanelanga, nto leyo kuphela xa ifeni okanye ombane panel wezijikelezi-langa ngaphezu ombane ibhetri bangena charging.Now inkqubo ingaba ukutshaja ukusuka voltage.If ephantsi abasebenzisi wakhetha unxibelelwano umsebenzi, ukuba ungabeka ombane intlawulo nge-softwe.
2 umsebenzi Unxibelelwano: Ngaba wakhetha RS232 yekhompyutha yonxibelelwano, Ukubonelela isoftwe esweni kude kunye nofakelo lwesoftwe iliso controller.After, abasebenzisi khangela wamisa parameters nge-softwe. Ngamaxesha efanayo, abasebenzisi ukubeka ubuninzi irekhodi kwindlela inkqubo ukusebenza kwi Excel ukusindisa.
3 Inkqubo Isilawuli: Abasebenzisi wakhetha GPRS engenazingcingo Wi-Fi umsebenzi yonxibelelwano, system.Users umncedisi unxibelelwano lezibuko uyakwazi ukulawula ezinye iinkqubo ngokusebenzisa ikhompyutha omnye ngexesha elinye.
Previous: MPPT umoya gqith solar isilawuli WWS30A-48 / -96 / -120 / -220 / -240
Next: MPPT umoya gqith solar isilawuli WWS100A-120 / -220 / -240 / -360
Rated Intsukumo Power Ubuninzi
Kulinganiselwa Power Solar
Kunako Battery Voltage
Battery ibanga itshaja ombane
Rated Intsukumo Input Maximum Current
Intsukumo Maximum yokufaka Power
Bethule Voltage ( mveliso okwendalo )
Bethule Current ( mveliso okwendalo )
-5mv / ℃ / 2V ( Over ukhuseleko ukubhobhoza , recovery ombane phezu-ukubhobhoza , ubuya kuyithula apho imbuyekezo ombane )
Battery Ingozi , Intsukumo Ingozi , PV Ingozi , Intsukumo ngoku , PV ngoku , Intsukumo Power , PV Power , Ngaphantsi-ombane , elifutshane-wesiphaluka , Night.Etc
Range lobushushu ukusebenza & Ukufuma
-20 ~ + 55 ℃ / 35 ~ 85% RH ( Ngaphandle Ukujiya )
Iiseli Solar reverse akuba , iiseli Solar anti-reverse , ibhetri phezu kwentlawulo , ibhetri phezu-ukubhobhoza , ibhetri anti-reverse , phezu umthwalo , ukulayisha elifutshane-wesiphaluka , ukukhanyisa , umoya ephendulwa ngoku umda, umoya ephendulwa waqhekeza oluzenzekelayo wayaphula manual.
Ukuze ukunika ngcono abaxumi bethu ukukhonza, singakwazi zilungiswe uqwalaselo kunye parameters ngokwendlela isicelo umthengi lowo
10A Wind Solar Hybrid Controller Charger
Wind Solar Hybrid Controller Charger
WS hybrid Grid Tie INVERTER CTW-TLS-10KS / -20KS
MPPT umoya gqith solar isilawuli WWS02A-12/03 ...
MPPT umoya gqith solar isilawuli WWS100A-120 / -...
MPPT umoya gqith solar isilawuli WWS20A-48 / -96 ...
120VDC MPPT isilawuli intlawulo elanga
Yesiqhelo Wind Grid Tie Inverter WG-CTW-2KVA ...